Eden Hazard oo farriin diray ka hor kulankiisa ugu horreeya ee Madrid Derby – Gool FM
Eden Hazard oo farriin diray ka hor kulankiisa ugu horreeya ee Madrid Derby
(Madrid) 27 Sebt 2019. Eden Hazard ayaa ka hadlay kulanka adag ee Madrid Derby ee dhex mari doono labada kooxood ka dhisan caasimada Madrid ee Real Madrid iyo Atlético Madrid.
Real Mdrid ayaa Sabtida la ciyaari doonto kulanka horyaalka La Liga ee la wada sugayo ee Madrid Derby kooxda Atlético Madrid, kaasoo ka dhici doono garoonka Wanda Metropolitano.
Eden Hazard ayaa isku diyaarinaya inuu ciyaaro kulankiisa ugu horeeyay ee Madrid Derby, kaasoo ay isaga hor imaanayaan kooxaha Real Madrid iyo Atlético Madrid, kaasoo ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan xilli ciyaareed kasta horyaalka La Liga.
Hazard ayaa wuxuuna carabka ku adkeeyay sida uu u doonayo inuu goolal dhaliyo isla markaana uu ka guuleysto kulanka uu ka hor imaanayo saaxiibkiis hore kooxda Chelsea ee Diego Costa.
Hazard oo ka hadlayay dareenkiisa kahor kulanka Sabtida ee Madrid Derby wuxuuna yiri:
“Dareenka kahor kulanka Madrid Derby waa mid aad u xoogan, iyadoo jaceyl laga filayo taageerayaasha, gaar ahaan marka ay arrinta quseyso laba kooxood ee isku magaalo ah sida Real Madrid iyo Atlético Madrid”.
Dhinaca kale Eden Hazard ayaa diray fariin kahor kulanka Madrid Derby wuxuuna yiri:
“Waxaan doonayaa inaan goolal dhaliyo, oo aan helo natiijo ah guul kulanka Madrid Derby ee Atlético Madrid, waxa kaliya aan doonayo ayaa ah inaan arko taageerayaasha Real Madrid oo aad u faraxsan, isla markaana aan halkeena ka sii wadno guulaha kooxda”.
“Ciyaaraha Derby-ga, waa mid ku xiran xaalad maskaxeed iyo rabitaanka ah inaad guuleysato waana lama huraan, marka aad ciyareyso kubadda cagta waad ogtahay qiimaha ay leeyihiin kulamda noocan oo kale ah iyo waxa ay tahay inaad sameyso”.
Ugu dambeyntii Eden Hazard ayaa waxaa wax laga weydiiyay kulanka uu Sabtida kaga hor imaan doono saaxiibkiis hore kooxda Chelsea ee Diego Costa wuxuuna yiri:
“Diego Costa waa xiddiga aan in badan xiiseenayo inaan kaga hor imaado kulankan sababtoo ah waa saaxiibkeey, waxaan ka soo wada ciyaarnay hal koox”.
Tababare Unai Emery oo ku dhawaaqay kabtanka joogtada ah ee kooxda Arsenal